Ebumnuche 9 Ihe kpatara itinye ego na sọftụwia Ntanetị Ntanetị bụ ego kachasị mma maka uto azụmahịa gị
Abia na uto azụmaahịa, ojiji nke teknụzụ agaghị ekwe omume! Site na obere nne na ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa na nnukwu ụlọ ọrụ, ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha na itinye ego na teknụzụ na-akwụ nnukwu ụgwọ na ọtụtụ ndị nwe ụlọ ahịa anaghị amata ibu ibu itinye ego na teknụzụ. Ma ịnọ na-aga n'ihu na nkà na ụzụ na ngwanrọ na-aga n'ihu abụghị ọrụ dị mfe. Ọtụtụ nhọrọ, ọtụtụ nhọrọ ing Etinye na nri Ntuziaka ahịa software maka azụmahịa gị dị oké mkpa na
Kedu ka Deepfake Technology ga-esi nwee Mmetụta Azụmaahịa?
Wednesday, December 30, 2020 Wednesday, December 30, 2020 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ịnwalebeghị ya, ikekwe ngwa mkpanaka m na-ekpori ndụ na afọ a bụ Reface. Ngwa mkpanaka ahụ na-enye gị ohere iwere ihu gị ma dochie ihu nke onye ọ bụla na foto ọzọ ma ọ bụ vidiyo n'ime nchekwa data ha. Gịnị Mere E Ji Akpo Ya Deepfake? Deepfake bu nchikota nke okwu di omimi na fake. Deepfakes leverage igwe na-amụrụ ihe na ọgụgụ isi iji gbanwee ma ọ bụ mepụta ọdịnaya anya na ọdịyo
Ndị na-akparịta ụka na-aga n'ihu na-enwewanye ọkaibe ma na-enyekwa ọtụtụ ndị na-enweghị ahụmịhe saịtị maka ndị ọbịa karịa ka ha mere otu afọ gara aga. Mkparịta ụka mkparịta ụka dị na obi nkata nkata chatbot ọ bụla successful na ọdịda ọ bụla. A na-etinye Chatbots maka ijide njide na iru eru, nkwado ndị ahịa na ajụjụ a na-ajụkarị (Ajụjụ), ịba ụgbọ ala, ndụmọdụ ngwaahịa, njikwa ọrụ mmadụ na nchịkọta, nyocha na nyocha, ntinye akwụkwọ, na ndoputa. Na-atụ anya nke ndị ọbịa na saịtị
Ọ bụrụ na ị bụ akụkụ nke obodo anyị ruo nwa oge, ị maara ka anyị si hụ ụdị ndọda maka iwulite ụlọ na nchịkọta data na WordPress. Ọ bụ naanị ihe na-egbuke egbuke. N’oge na-adịbeghị anya, ejikọtara m ụdị gravity na Hubspot maka onye ahịa yana ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Isi ihe mere m ji ahọrọ ụdị gravity bụ na ọ na-echekwa data na mpaghara. Ihe ntinye ya niile maka gravity Forms ga - enyefe data ahụ na
Na ogbako a na-adịbeghị anya, mụ na ndị isi mgbasa ozi ndị ọzọ na-akparịta ụka banyere otu ihu igwe na-adịghị mma na-eto eto na mgbasa ozi. Ọ bụghị nke ukwuu banyere nkewa ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ozuzu ya, nke doro anya, mana banyere stampụ nke ọnụma na-akwụ ụgwọ mgbe ọ bụla esemokwu bilitere. Eji m stampụ mee ihe n'ihi na ọ bụ ihe anyị hụrụ. Anyị anaghịzi akwụsị iji chọpụta okwu a, na-echere ihe, ma ọ bụdị nyochaa ihe gbara ya gburugburu